Wed, Nov 25, 2020 | 08:13:57 NST
यस्तो छ बाराको पछिल्लो परिणाम, सुवर्ण गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी
बारा, असोज ७ – बाराको सुवर्ण गाउँपालिकामा अध्यक्षमा संघीय समाजवादी फोरमका महेन्द्रप्रसाद यादव विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ३ हजार ६५ मत ल्याउनुभयो ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर र दुर्गा भगवतीमा कांग्रेस विजयी
रौतहट, असोज ७ – रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका गोपाल राय यादव विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ३ हजार ९९ मत ल्याउनुभयो भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र यादवले २ हजार ९ सय ८६ मत पाउनुभयो ।
प्रदेश नं २ : अहिलेसम्मको नतिजा, कसले कहाँ जिते ?
काठमाडौं, असोज ७ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको अग्रता छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाल संघीय समाजवादीले प्रमुख पद जितेका छन् ।
धनुषाको १८ मध्ये १६ तहको नतिजा सार्वजनिक
धनुषा, असोज ७ – धनुषाका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म १६ वटा तहको नजिता सार्वजनिक भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले धनुषाको ७ तहमा जितेको छ । नेकपा एमाले ४, संघीय समाजवादी फोरमले २, माओवादी केन्द्रले २ र राजपा नेपाल १ तहमा विजयी भएका छन् ।
सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी
सर्लाही, असोज ७ – सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रका विक्रम यादव ३ हजार २१६ मतसहित विजयी हुनुभएको छ ।
सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा राजपा विजयी
सप्तरी, असोज ७ – सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजपाका सतिस कुमार सिंह २९८७ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । उपाध्यक्षमा सुचिता कुमारी यादव २ सय ९६६ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।
​धनुषाको कमला र नगराईन नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
धनुषा, असोज ७ – धनुषाको कमला नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा कांग्रेसका रामउदगार गोइत ४०२० मतसहित विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादी फोरमका पशुपति यादवले २६९७ मत प्राप्त गर्नुभयो
काठमाडौं, असोज ७ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको अग्रता छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, नेपाल संघीय समाजवादी र नयाँ शक्ति नेपालले प्रमुख पद जितेका छन् ।
धनुषाको विदेह नगरपलिकामा माओवादी विजयी, दुई नम्बर प्रदेशकै पहिलो दलित मेयर
जनकपुर, असोज ७ – धनुषाको विदेह नगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । माओवादी केन्द्रबाट धनुषामै मेयर पदका एक मात्र दलित उम्मेदवार बेचन दास तत्मा विजयी हुनुभएको हो ।
​सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा एमाले विजयी
सर्लाही, असोज ७ – सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका मेयरमा नेकपा एमालेका मानबहादुर खड्का विजयी हुनुभएको छ । उहाँले ८ हजार ९४९ मत ल्याएर मेयरमा निर्वाचित हुनुभएको हो ।
​सप्तरीको बलान बिहुन गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी
सप्तरी, असोज ७ – सप्तरीको बलान बिहुन गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम दयानन्द गोहित २२ सय ३८ मतसहित अध्यक्षमा र रुबी गुप्ता १८०२ सय मतसहित उपाध्यक्षमा विजयी हुनुभएको छ ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा एमाले विजयी
धनुषा, असोज ७ – धनुषाको मिथिला नगरपालिका मेयर र उपमेयरमा एमालेले जित हासिल गरेको छ । एमालेका मेयर उम्मेदवार हरिनारायण महतोले ६७ सय ४० मत पाउनुभयो भने उहाँको निकटमत प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका राजकुमार महतोले ५१ सय ७८ मत पाउनुभयो ।
७० स्थानीय तहसहित ९०७ वडाको मत परिणाम सार्वजनिक
काठमाडौं, असोज ६ – गएको २ गते चुनाव सम्पन्न भएका प्रदेश नं २ का ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमध्ये अहिलेसम्म ७० तहको मतगणना सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको अग्रता छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाल संघीय समाजवादीले प्रमुख पद जितेका छन् ।
पर्सा, असोज ६ – प्रदेश नम्बर २ को एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा नेपाली कांग्रेस अघि छ । ८४ हजार भन्दा बढी मत खसेकोमा २७ हजार ३ मत गन्दा कांग्रेसले अग्रता कायम गरेको छ ।
रौतहट, असोज ६ – स्थानीय तहको चुनावमा नेकपा एमालेले रौतहटबाट एउटा पनि तहमा प्रमुख पद नजित्ने पक्का भएको छ । पार्टी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको गृहजिल्ला समेत रहेका यहाँ एमालेले अहिलेसम्म एउटा पदमा पनि प्रमुख जितेको छैन ।
जनकपुर उपमहानगरमा कांग्रेसभन्दा ७४६६ मतले राजपा अघि
धनुषा, असोज ६ – धनुषाको जनकपुर उपमहानगरमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल राजपाले अग्रता बढाउँलै लगेको छ । राजपा दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कांग्रेसभन्दा ७४६६ मत अन्तरले अघि छ ।
सप्तरीको १८ स्थानीय तहमध्ये ७ को नतिजा आयो, बाँकी ११ तहमा कसको कति अग्रता ?
सप्तरी, असोज ६ – सप्तरीको १८ मध्ये ७ स्थानीय तहको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । जसमा कांग्रेस तीन, राजपा दुई, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र एमाले एक एक स्थानमा निर्वाचित भएका छन् ।
सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा राजपा विजयी
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको बलरा नगरपालिकामा राजपाका अभय सिंह ४ हजार ९ सय ५ मत ल्याएर मेयर पदमा विजयी हुनुभएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसका डा कमलेश्वर सिन्हालाइ ५७८ मतले पछि पार्दै मेयर पदमा विजयी हुनुभएको हो। डा सिन्हाले ४ हजार ३२७ मत ल्याउनु भएको छ।
भँगाहा नगरपालिका र एकडारा गाउँपालिकामा राजपा विजयी, बलवामा सबै वडाको मत फेरि गन्ने
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरी भँगाहा नगरपालिकामा राजपा विजयी भएको छ । भँगाहा नगरपालिका मेयरमा संजिवकुमार साह ४४७८ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो । यस्तै उपमेयरमा गंगाकुमारी सिंहले ४३९६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।
महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकामा माओवादी विजयी
महोत्तरी, असोज ६ – महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ । माओवादीका फारुक शेख २३२८ मतसहित अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो ।
​बाराको सिमरौनगढ नगरपालिका मेयरमा कांग्रेस, उपमेयरमा राजपा
बारा, असोज ६ – बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । कांग्रेसका विजयशंकर यादव मेयरमा विजयी हुनुभएको हो । उपमेयरमा राजपाकी रिमादेवी विजयी हुनुभएको छ ।
धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिकामा कांग्रेस विजयी
धनुषा, असोज ६ – धनुषाधाम नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुबैमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा बालेश्वर मण्डल ४ हजार ४ सय ७३ मतसहित विजयी हुनुभयो ।
बाराको विश्रामपुर गाउँपालिकामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विजयी
बारा, असोज ६ – विश्रामपुर गाउँपालिकामा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम विजयी भएको छ । फोरमका अमिरी पाल ३ हजार ६ सय ३६ मत ल्याएर अध्यक्षमा विजयी हुनुभएको हो ।
एमालेलाई भारी मत अन्तरले हराउँदै बागमती नगरपालिकामा माओवादी विजयी
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भरतकुमार थापा ७ हजार २८१ मत ल्याएर मेयर पदमा विजयी हुनुभएको छ । उहाँले नेकपा एमालेका बिष्णु पुलामीलाइ २ हजार ९३८ मतले पछिपार्दै मेयर पदमा बिजय हुनुभएको हो ।
प्रदेश नम्बर २ मा भएको स्थानीय तहको चुनावको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्म कांग्रेसको अग्रता छ । अहिलेसम्म राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाल संघीय समाजवादीले प्रमुख पद जितेका छन् ।
सर्लाहीका ८ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक, अहिलेसम्म एमाले र माओवादी शुन्य
सर्लाहीको २० वटा स्थानीय तह मध्ये ८ स्थानको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । जसमा नेपाली कांग्रेसले ४, राजपाले २, संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १, लोकत्रान्त्रिक फोरमले १ स्थानमा जित निकालेको हो ।
सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा कांग्रेस विजयी
सप्तरी, असोज ६ – सप्तरीको अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै पदमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । कांग्रेसका परशुराम चौधरी ३३९५ मतसहित अध्यक्षमा विजयी भएका छन् ।
धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी
धनुषा, असोज ६ – लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी भएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरमा संघीय समाजवादी फोरमले राजपालाई पछि पार्‍यो
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका १२ नम्बर वडाको मतगणना फेरि हुने
सर्लाही, असोज ६ – सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका १२ नम्बर वडाको मतगणना पुनः हुने भएको छ। गणना गरिएको मत फरक देखिएपछि दोहोर्‍याएर गणणा गर्ने सहमती भएको हो।
धनुषा, असोज ६ – धनुषाधाम नगरपालिकाको मेयर र उपमेयर दुबैमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा बालेश्वर मण्डल ४४७३ मतसहित विजयी हुनुभयो । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका योगकुमार मण्डलले ३५५७ मत पाउनुभयो ।
बाराको फेटा गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी
बारा, असोज ६ – बाराको फेटा गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम विजयी भएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अमिरीलाल प्रसाद शाह २ हजार ६ सय ११ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको हो ।
रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्र विजयी
रौतटह, असोज ६ – रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै पदमा माओवादी केन्द्र विजयी भएको छ ।
धनुषामा माओवादी केन्द्रले खाता खोल्यो, शहीदनगर नगरपालिकामा विजयी
धनुषा, असोज ६ – शहीदनगर नगरपालिका मेयरमा माओवादी केन्द्रका उदय कुमार बरबरीया यादव विजयी हुनुभएको छ । उपमेयरमा माओवदी केन्द्रकै शिलादेवी कापडी विजयी हुनुभयो ।
वीरगञ्ज महानगरमा कांग्रेसको अग्रता, कसको कति मत ?
पर्सा, असोज ६ – दुई नम्बर प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको मतगणना भइरहेको छ । अहिलेसम्मको नतिजा अनुसार कांग्रेस अग्र स्थानमा छ । दोस्रोमा राजपा छ ।
बाराको परवानीपुर गाउँपालिकामा राजपा विजयी
बारा, असोज ६ – बाराको परवानीपुर गाउँपालिकाको अध्यक्षमा राजपाका हरिनारायण साह २६७८ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ । उहाँका प्रतिस्पर्धी एमालेका राम क्षेत्री पटेलले १८ सय मत पाउनुभयो ।
सिरहा, असोज ६ – सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार रामऔतार यादव विजयी हुनुभएको छ । यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेकै रेणु देवी शाह विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतले जानकारी दिएका छन् ।
जनकपुर, असोज ६ – जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले अग्रता कायमै राखेको छ ।